Can i talk to you in - Английский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: can i talk to you in person (Английский - Бирманский)
so can i ask you?, in which country do you live my friend?
so can i kindly ask you?, In Which country do you live my friend?
Последнее обновление: 2014-03-11
But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.
ထိုမှတပါး၊ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တကွ သင်တို့ဆီသို့ နောက်တဖန် ငါလာမည်ဟု ငါစိတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။
Последнее обновление: 2012-05-04
This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.
ဤတတိယအကြိမ်တွင် သင်တို့ဆီသို့ ငါလာမည်ဖြစ်၍၊ သက်သေခံနှစ်ဦးသုံးဦးအားဖြင့် စကားရှိသမျှ တို့သည် တည်ရလိမ့်မည်။
အတွင်း၌ကြမ်းတမ်းသော တောခွေးဖြစ်လျက် သိုးရေကိုခြုံ၍သင်တို့ရှိရာသို့လာသော မိစ္ဆာပရောဖက် တို့ကို သတိနှင့် ရှောင်ကြလော့။
စပါနိပြည်သို့ငါသွားသောအခါ၊ လမ်းခရီး၌ သင်တို့ကို တွေ့မြင်၍ သင်တို့နှင့်အတူပေါင်းဘော်လျက် အတန်အရာအလို ပြည့်စုံပြီးမှ၊ ထိုပြည်သို့သင်တို့ ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံမည်ဟု မြော်လင့်၏။
For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is foundatruth.
အထက်ကငါသည် သင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ ဝါကြွားသော စကားကိုထိုသူအားပြောပြီးလျှင်၊ ယခု ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။ ငါတို့သည် အရာရာ၌ သင်တို့အား ဟုတ်မှန်စွာပြောသည်နည်းတူ၊ တိတုရှေ့၌ ငါ ဝါကြွားသောစကားသည်လည်း မှန်သောစကားဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
သင်တို့သည် စားသောက်ရာဘို့ ကိုယ်အိမ်မရှိ သလော။ သို့မဟုတ်လျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် ကို မထီမဲ့မြင်ပြု၍၊ ဆင်းရဲသောသူတို့ကို ရှက်ကြောက် စေသလော။ အဘယ်သို့ ငါဆိုရမည်နည်း။ ဤအမှုမှာ သင်တို့ကို ချီးမွမ်းရမည်လော။ မချီးမွမ်းရ။
သွား၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားထင်ရှားတော် မူလျက်၊ အကယ်စင်စစ် သင်တို့ကို ငါအကြည့်အရှုလာ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ သင်တို့အားပြုသောအမှုကို ငါမြင်ပြီ။
Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.
mar gaya sala (Хинди>Английский)nag aalaga ako ng bata (Тагальский>Английский)kinsa na (Себуанский>Тагальский)nakaka aning kang kausap (Тагальский>Английский)where do i begin (Английский>Тагальский)do you sleep naked (Английский>Тагальский)carabineros celestiales meaning (Испанский>Тагальский)jerk off instructions (Английский>Французский)martis filius (Латинский>Английский)at,in,on (Английский>Тагальский)rêvons plus grand (Французский>Английский)maksud obey (Английский>Малайский)aap nahi samjhoge (Хинди>Английский)马来文翻译爱护 (Китайский (упрощенный)>Малайский)taghmel rikors (Мальтийский>Английский)kohlenstoffbeschichteter (Немецкий>Английский)tumpang sekaki (Малайский>Английский)bandha meaning in telugu (Английский>Телугу)atochemos (Испанский>Китайский (упрощенный))troed y rhiw (Валлийский>Английский)tali tambang (Малайский>Английский)japon ka (Себуанский>Тагальский)nee yaru (Тамильский>Английский)non forfeiture (Английский>Малайский)may pakisama] (Тагальский>Английский)